ShweMinThar: ဆက်ဆံရင်း ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတာ.
အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း သည် HIV ကို ကာကွယ် ပေးကြောင်း ဟီလာရီကလင်တန်၊ WHO နှင့် ဗြိတိသျှ စွယ်စုံကျမ်းတို့က တင်ပြ
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ကျရောက်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူး၊ ဟီလာရီကလင်တန်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါ ပိုးကို ကာကွယ်ရန် အတွက် အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းသွားခဲ့ကြောင်း စီအင်အင် သတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကျင်းပလာခဲ့သလို အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း ထိုနေ့တွင် အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကြီးမှူးသည့် ပြည်သူ့အတွက် တရားဝင်ကြေငြာချက်ကို ၁၉၉၅ မှ စတင်၍ ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ယခုနှစ် အတွက် ဟီလာရီကလင်တန်၏ကြေငြာချက်၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း jဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
၁၉၈၁ မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်များအတွင်း အေအိုင်ဒီအက်စ်ကြောင့် လူပေါင်း ၂၅ မီလီယံ သေဆုံးခဲ့ ရသလို မြန်မာပြည်၌လည်း စစ်တမ်းများအရ တစ်နာရီတွင် လူနှစ်ဦးမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ကြောင့် သေဆုံးနေရသည်။ စီအင်အင်မှ တင်ပြခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဟီလာရီကလင်တန်က အေအိုင်ဒီအက်စ်ကာ ကွယ်ရေးအတွက် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု တိုးတက်စေရန်နှင့် အမျိုးသားများ အရေပြားလှီးဖြတ်မှုများ တိုးတက် လုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဂျူးများ၊ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ကော့ပ်တစ်ခရစ်ယာန်များမှာ အရေပြားလှီးဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်ကြသည်။ အချို့သော ခရစ်ယာန်များကမူ ပြုလုပ်ဆောင် ရွက်ခြင်း မရှိကြပေ။ သို့သော် ထိုခရစ်ယာန်များက အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းအား ပိတ်ပင်ဖို့အထိ ဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြသော်လည်း အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းကို ၄င်းတို့၏ ဘိုးဘေးများကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြခြင်းဆိုသည့် အကြောင်းတွင်မူ နုတ်ဆိတ်လျက် ရှိနေကြသည်။ ၂၀၁၂ တွင်မူ ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေး သမားအချို့က အရေပြားလှီးဖြတ်ခြင်းအား ပိတ်ပင်ဖို့ တောင်းဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ဝေဖန်နေကြသူများ မသိရှိကြသည့် အကြောင်းမှာ ၄င်းတို့၏ နည်းဗျူဟာ အထမမြောက်စေဖို့ 0.1 micron သာရှိသည့် အလွန်သေးငယ်လှသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ဇီဝိန်ခြွေရင်း လုပ်အားနှုန်းကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေစေခြင်းပင်။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်၏ အမည်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ စွယ်စုံကျမ်းဖော်ပြချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
“အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းကို သာသနာရေးဆိုင်ရာ အရေးပါသည့် ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် လူ့ယဉ်ကျေးမှု အများစုတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာ – ဂျူးသာသနာတွင် အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းအား တမန်တော် အီဗရာဟင်မ်နှင့် ဘုရားသခင် တို့အကြား ထားရှိသည့် ပထမဆုံးသော ကတိက၀တ်အဖြစ် ဖြော်ပထားသည်။ ထိုသည်ကို ပထမဆုံးသော ကောင်းကင်ကျ အမိန့် ၊ ပန်တာတျူ (Genesis 17:10–27) တွင် ဖြော်ပထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောင်္ကျား ကလေး၊ ကလေးငယ်တိုင်းကို အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်သာသနာတွင်မူ အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်မနေ တာဝန် အဖြစ် ပြဌာန်း ထားခြင်းမရှိဆိုသည့် ပညတ်ချက်ကိုမူ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ဘိုင်ဘလ်ကျမ်းစာ Acts 15 တွင်မှာမှ တွေ့ရှိရသည်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တိုင်းရေးပြည်ရာဝန်ကြီး၊ ဟီလာရီကလင်တန်ကိုပင် အရေပြားလှီးဖြတ်ခြင်း အကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားစေသည်အထိ ၄င်းအရေပြားလှီး မင်္ဂလာအပေါ် ခေတ်သစ် ပညာရှင် များ၏ တွေ့ရှိချက်က မည်သို့ မည်ပုံဖြစ်နေသနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းမှာလည်း စိတ်ဝင် စားဖွယ်မေးခွန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးပါသည့် တွေ့ရှိချက်မှာ အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းသည် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ပေးသည် ဟူသည့် တွေ့ရှိချက်ပင်။
ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ -
”အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းအား ထောက်ခံပြောဆို ကြသူများ က အရေပြားလှီးဖြတ် ထားသော ယောင်္ကျားသည် အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ ဆစ်ဖလစ်နှင့် အခြားသော လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာရောဂါ များမှ ပို၍ အကာအကွယ် ရထားပြီးသည့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို ကိုးကားတင်ပြကြသည်။ ထို့ပြင် အရေပြား လှီးဖြတ် ထားသည့် ယောင်္ကျားကြောင့် သူ၏ လိင်အဖော် မိန်းမသားမှာလည်း သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာရောဂါ (Cervical Cancer) မှ အကာအကွယ် ရပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၀၇ တွင် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က အာဖရိက ယောင်္ကျားများကို အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့် ပတ်သတ်၍ သုတေသနလုပ်ခဲ့ရာ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်နှင့် ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိလာမည့် ဆိုးကျိုးများထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၄၈ မှ ၆၀ ကို အရေပြားလှီးဖြတ် ထားခြင်းက အကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် WHO က ၄င်းရလဒ်ကို အခြေခံကာ အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းကို စံပုံစံ အကာ အကွယ် နည်းနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ တားဆီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက် လာခဲ့ကြသည်။ “
ထို့ကြောင့် အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေကြသူများ အနေဖြင့် ချင့်ချိန်စဉ်းစား သင့်သည်မှာ ၄င်းတို့၏ ဆန့်ကျင်မှုမှာ ကျိုးကြောင်း ညီညွှတ်မှု ရှိ၊ မရှိဆိုသည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
Arakan Press - အရေပြား လှီးဖြတ်ခြင်း သည် HIV ကို ကာကွယ် ပေးကြောင်း ဟီလာရီကလင်တန်၊ WHO နှင့် ဗြိတိသျှ စွယ်စုံကျမ်းတို့က တင်ပြ
မေး။ ။ ကျွန်တော် အသက် ၂၄ ပါ အတွေ့အကြုံ မရှိပါဘူး။ ပထမဆုံး အကြိမ် ဆက်ဆံတာ ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတယ်.. အရမ်းကြောက်နေတယ်။ သံသယလည်း ၀င်နေတယ် ရောဂါများ ရနေပြီလားလို့. အဲဒီအချိန်မှာ မူးနေတယ်။ အခုချိန်မှာ ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ၊၊ ပြောပြပေးပါ။
အဖြေ။ ။ ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတဲ့ အတွက် သံသယ ၀င်နေတာကို ကုစားနိုင်တာကတော့ သွေးစစ်ပြီးတော့ ရောဂါပိုးတွေ ကူးသွား သလားဆိုတာ စမ်းသပ် ကြည့်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မရှင်းလင်းတာတစ်ခုက အခု ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတာ ဘယ်သူနဲ့ အတူနေရင်း ကျွတ်တာလဲ၊ ဥပမာ ချစ်သူနဲ့လား၊ အပြင်က ကြေးငွေပေးပြီး ခေါ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးလား ဆိုတာ သိရရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတာ ဘယ်လောက်နေမှ သိတာလဲ၊ လိင်ကိစ္စပြီးမှ သိတာလား၊ ကျွတ်ကျွတ်ပြီးချင်း တန်းသိတာလား၊
နောက်မေးခွန်းက ကွန်ဒုံးကျွတ်တာ သိတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘယ်လိုနေလိုက်သလဲ၊ ဆိုလိုတာက ကွန်ဒုံးကျွတ်တာ သိရက်နဲ့ လိင်ကိစ္စ ဆက်ဖြစ်နေလား၊ ရပ်လိုက်တာလား၊ နောက်ထပ် ကွန်ဒုံးတစ်ခု ထပ်သုံးပြီး လိင်ကိစ္စ စခန်းသွားနေခဲ့ပါသလား။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းက အဲဒီ လိင်ကိစ္စဖြစ်တာ အခု ကာလ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ဥပမာ - ဘယ်နှစ်ရက် ရှိပြီလဲ၊ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးနိုင်ရင်တော့ ကျနော်တို့ ဘက်က ဖြေပေးရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ အခုတော့ ကွန်ဒုံး ကျွတ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာကို ဖြေဖျောက်ဖို့ အတွက် ဘယ်လို သွေးစစ် မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။
ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတာ အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်သွား ပါတယ်။ ဒီတော့ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်။ ဘာရောဂါတွေ အများအားဖြင့် ကူးစက်တက်သလဲ ဆိုတော့
- ကာလသားရောဂါ (ဆစ်ဖလစ်၊ ဂနို၊ ကလမိုက်ဒီးယား စသည့်ရောဂါများ)
- အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး
- အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ စတာတွေ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သွေးစစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကာလသားရောဂါတွေကတော့ လိင်ကိစ္စပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ချက်ချင်း သွေးစစ်ရင် သွေးထဲမှာ သိနိုင် မြင်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊စီပိုးတွေ ကလည်း သွေး စစ်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ HIV ကတော့ လိင်ကိစ္စပြီး နောက် ၃ လနဲ့ ၆ လအတွင်းမှာ သွေးစစ်မှ ရှိ/မရှိကို သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ စိတ်အေးအေးနေချင်ရင် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး အရင်ဆုံး ကာသလားရောဂါပိုးနဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ စစ်လို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ နေတယ် ဆိုရင်တော့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတွေ မှာလည်း ပြသပြီး စစ်လို့ရပါတယ်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး အတွက်ကတော့ လိင်ကိစ္စအပြီး ၃ လမပြည့်သေးဘူးဆိုရင် အလားတူ လိင်ကိစ္စတွေ မပြုလုပ်ပဲ ရှောင်နေပြီး ၃ လကျော်မှ သွေးစစ် သင့်ပါတယ်။ ၃ လမှာ စစ်လို့ မတွေ့သေးဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် ၃ လ ထပ်စောင့် (စုစုပေါင်း ၆ လ) ပြီး သွေးထပ်စစ်ပါ။ အဲဒီမှာ မတွေ့ရင်တော့ စိတ်အေးရပါပြီ။ ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုရင်တော့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့စည်းတွေမှ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေး သင့်ပါတယ်။
လိင်ကိစ္စ ပြုလုပ်ခဲ့တာကို အပြစ်ကြီး တစ်ခုအနေနဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်မတင်စေချင်ပါဘူး။ လိင်ကိစ္စဟာ လူသားတိုင်းအတွက် သာမန် လိုအပ်ချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် တစ်ခါတွေမှာ လိင်ကိစ္စဖြစ်တိုင်း စနစ်တကျ ကွန်ဒုံး သုံးဖို့နဲ့ အရက်စတဲ့ မူးယစ်စေတဲ့ အရာတွေကို မသုံးမိဖို့ ဆင်ခြင်သင့် ပါတယ်။